Mahafantatra vintana | Martech Zone
Talata, May 6, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Androany tolakandro dia nisy famelabelaran-kevitra nataoko niaraka tamin'ny firenen-dalàna iray eo amin'ny sehatry ny asa sosialy. Nahafinaritra ny nahita fikambanana iray izay nanana fahitana mialoha mba hampiharihariana ireo mpiasany amin'ny haino aman-jery vaovao. Miova tokoa izao tontolo izao fa mbola misy ny tsy fanao eto fa ny media sosialy dia 'izay ataon'ireo tanora' ary mbola tsy raisina am-po izany.
Ny indostrian'ny gazety - fotoana tsy nahy
Folo taona lasa izay, niara-niasa tamin'ny gazety aho ary nijery azy ireo niambina mangina eBay ary craigslist. Noheverin'izy ireo ho an'ny geeks sy ny tanora ihany koa izany… mandra-pivoakan'ny kapoaka an-tapitrisany dolara avy eo ambanin'izy ireo. Raha ny tena izy, tsy tena yanked, dia nosarihana moramora.
Gazety maro no nanoratra tamim-pahagagana ny firoboroboan'ireo haitao ireo, tsy nanelingelina azy ireo fa hiala ao amin'ny orinasan'izy ireo manokana izany. Gazety maro no nanana ny rantsantongony tamin'ny indostria an-tserasera (InfiNet no niara-niasa tamin'ny orinasan-dray aman-dreniko) saingy tsy nahomby izy ireo rehefa afaka nanao ny fampanjariam-bola ilaina… na dia fantatr'izy ireo aza fa mbola misy fotoana hanaovana izany. Nosokafana ny tsipika ahazoana tombony amin'ny orinasa, ary tsy misy mpitantana handray 50% ny sisin-tany hanaraka an'ity tontolo vaovao ity.
Ny gazety dia nanana ny fandrakofana sy ny loharanom-bola hanoherana ny fatiantoka. Nanana tombony tamin'ny marika matoky ny faritra aza izy ireo. Raha tokony hifanaraka amin'izany izy ireo dia nanondro rantsan-tànana ary nanakalo ny mpitantana iray izay tsy nahatakatra ny manaraka izay tsy nahazo.
Nandritra ny folo taona niarahako tamin'ny gazety dia tsy tadidiko mihitsy ny fotoana iray izay nisy olona niditra sy niresaka momba ireo haitao vaovao ary nanontany na nifanakalo hevitra momba ny fomba hampiasana azy ireo hanatsara ny fahombiazany na hampitomboana ny tombom-barotra.
Namelombelona androany ny nahita orinasa iray eo an-toerana manana fomba fijery hafa!
The Burj Dubai - Foundation mafy orina
Ny iray amin'ireo sary mihetsika amin'ny famelabelarako dia sary mahafinaritra an'ny Burj Dubai, trano eo an-dàlam-panamboarana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra izay hiambina ambonin'ireo trano hafa rehetra. Voalahatra ho vita hatramin'ny faran'ny taona ho avy io ary tombanana ho 162 ny tantara ankehitriny.
Tantara 162 no tombana farany farany. Tsaho fa niova ny tanjona nandritra ny taona maro, ampahany noho ny tombatombana mety ho injeniera nanasongadina ny tanjaky ny fototra sy ny halavan'ny trano afaka hatsangana ho.
Zahao ny trano ary azonao atao ny manomboka mahatakatra ny antony. Ny fototry ny Burj Dubai dia mammoth tanteraka, ary ny spire dia manidina rehefa miakatra.
Haino aman-jery sosialy - fototra iray amin'ny orinasa
Media sosialy dia ny orinasanao fotoana hanombohana fananganana fototra ho an'ny fitomboana tsy mampino mandritra ny folo taona ho avy. Ny fametrahana marika an-tserasera amin'ny alàlan'ny media sosialy sy ny tambajotra sosialy dia mametraka ny fototry ny fifandraisana azo antoka.
Tahaka ny tranonkala iray, manomboka anio dia hanome anao harato lehibe ahazoana orinasa marobe amin'ny taona ho avy. Miova ny tontolo. Ny milina fikarohana - na dia i Google aza - dia hamoy ny sasany amin'ny fikajiany ny fomba hitetezantsika ny tranonkala madinika tambajotra manohy mitsangana sy miroborobo.
Ny vao haingana ny orinasan'ny orinasanao amin'ireo teknolojia ireo dia ho tsara toerana kokoa raha miankina aminy ny fivelomanao. Ilay orinasa niresahako androany dia manana fotoana miavaka. Manana talenta nametraka fahefana izy ireo ary miteraka tranga mitombo toy ny andininy tsy mifaninana sy ny lalàna momba ny patanty.
Raha nizara ireo zavatra niainany tamin'ny Internet ireo mpiasan'izy ireo amin'izao fotoana izao ary mametraka -tserasera fahefana, indrindra ny jeografia, hanome azy ireo tambajotra hampitombo ny orinasan'izy ireo rahampitso. Fotoana mampientanentana ho an'ity orinasa ity manokana - orinasa malala-tsaina izy ireo, lehibe manana fiatraikany, saingy kely ihany ny fihetsika sy fampifanarahana haingana an'ity habaka ity.
Manantena aho fa manararaotra sy mahatsapa ny fotoana tian'ny sasany tamin'izy ireo nanondro tao amin'ilay efitrano!
May 6, 2008 amin'ny 11: 53 AM
May 6, 2008 ao amin'ny 6: 54 PM
May 6, 2008 ao amin'ny 3: 09 PM
May 6, 2008 ao amin'ny 6: 58 PM
May 6, 2008 ao amin'ny 3: 37 PM
Why don’t these existing businesses change? Because there’s HUGE inertia is continuing on the same path. Christensen details it extremely well in Ny Dilemma momba ny Innovator.
May 6, 2008 ao amin'ny 7: 01 PM
May 10, 2008 amin'ny 8: 35 AM